War - Muraayadaha Muraayad Noocee ah ayaad Rabtaa inaad Xidhato Mustaqbalka?
Beri baa, waxaan wada dareemaynay in gabdhihii waaweynaa ee muraayadaha indha-sarcaadku xidhnayd ahaayeen dareemayaal, dareemayaan caajis iyo dareen la’aan kaftan ah. Si kastaba ha noqotee, sanadihii la soo dhaafay, shirkado badan oo waaweyn oo waaweyn ayaa taageeray iyaga, muraayadaha oo qof walbana uusan necbeysan ayaa si lama filaan ah u noqday waxyaabo moodada ah oo noqday isbeddel cusub.
Gabdhaha afar-aragga ah ayaa horay u xiran jiray muraayadaha indhaha oo kaliya diiradda saaraya waxqabadka, laakiin hadda waxay noqdeen kuwo diiradda saaraya qaabeynta qaabka. Xitaa waxay ku qalabeeyaan muraayado kala duwan guriga si ay ula jaan qaadaan qaababka maalinlaha ah.
Isbeddelkan casriga ah ee 'geek chic mood' ayaa la keenay laga soo bilaabo 2019 illaa 2020. Markaad aragto gucci-kan, Prada, fendi, chloe, iyo xitaa Chanel ayaa taageeraya, waxaan aaminsanahay in is-beddelkan muraayadaha fidsan runtii aan la joojin karin.
Xaqiiqdii, illaa iyo inta qalabka si wanaagsan loo xushay, waxay si dabiici ah ugu dari doontaa dhibco muuqaalka. Sidaa darteed, sida gabar moodada ah, waa inaad marka hore barataa inaad doorato qaab ku habboon naftaada.
Haddii bini-aadamku xaqiijin karo teknoolojiyada hurdada ee sheeko-gacmeedka sayniska "Saddex-Jir", muraayadaha indhaha nooca aad rabto inaad xirto mustaqbalka?
Muraayadaha noocee ah ayaa noqon doona wax aan caadi aheyn xitaa mustaqbalka, had iyo jeer hogaaminaya isbedelka, xitaa ka baxsan waqtiyada?
Dhawaan, waxaa jira labo filim oo khiyaali saynis saynis ah, "Blade Runner 2049" iyo "Ready Player One". Labada filimba waxay qeexayaan "dunida mustaqbalka", laakiin mustaqbalka mustaqbalka lagu soo sawiray labada filim wuu gabi ahaanba ka duwan yahay. ee.
Adduunyada "Ready Player One", bini'aadamku waxay gabi ahaanba isku halleeyeen waayo-aragnimada ugu sarreysa ee ay keeneen VR-dhamaadka sare.
Adduunyada ku jirta "Blade Runner 2049" waa sakhraansan tahay oo cidla tahay, tiknoolajiyada wax walba leh ayaa qoto-dheer bini-aadamka qoto dheer. Muraayadaha indhaha ee mustaqbalka ee aan kuu soo bandhigno, avant-garde waa astaamaha.
Filimyada 'cyberpunk' iyo shaqooyinka telefishanka, adduunka mustaqbalka badiyaa waa la burburiyaa. Magaalada mustaqbalka leh dabaqyo dhaadheer oo u eg seddex geesood, waxaa sidoo kale jira dad aad u tiro badan oo ah dad heer hoose ah iyo danno bulsheed oo ku nool waddooyin ciriiri ah oo ciriiri ah. Tiknoolajiyadda casriga ah, nalalka neon ee quruxda badan iyo shakhsiyaadka yaryar, jacaylka jilicsan, nacaybka iyo nacaybka ayaa ku kala duwan.
Midabada quruxda badani waa cunsur lagama maarmaan u ah cyberpunk. Marka la eego tiknoolajiyada qabow, midabadu waxay matalaan dareenka jilicsan ee hodanka ah ee aadanaha. DLL5333 waxaa kujira looxyo bir ah oo qurxoon iyo muraayadaha indhaha gaduudka qurxoon leh, iyo midabada quruxda badan waa lama iloobaan.
Muraayaddii weyneyd ee bisadaha oo leh dhadhankii hore ee 80-maadkii ayaa mar kale soo noqotay. Marka lagu daro dareenka ciyaarta iyo xarrago leh, muraayadaha mukulaasha ayaa leh saamaynta wax ka beddelka muuqaalka. Stella mccartney xitaa waxaa lagu qurxiyay qaababka xiddigaha. Naqshadayntu waa mid indho soo jiidasho leh waxayna hubaal noqon kartaa muuqaalka muuqaalka. Haddii aad u maleyneyso in muraayadaha 'monochromatic' ay aad u badan yihiin, waxaad dooran kartaa muraayadaha tokada. Muraayadaha Tortoiseshell had iyo jeer waxay ahaayeen xulashada muuqaalka hodanka ah, laakiin sidoo kale waxay muujin kartaa dabeecadda farshaxanka. Muraayadaha ay isku magaca yihiin naqshadeeyaha Jarmalka ee wolfgang proksch waxay isku daraan qalab kala duwan, oo leh alwaaxyo caramel tortoiseshell ah iyo gacmo bir ah. Naqshadeynta jirku waxay hodan ku tahay saddex-cabbir, taas oo aad ugu habboon gabdhaha moodada leh myopia.
Sida gabar jecel quruxda, ka sokow shaqeynta, moodada sidoo kale waa mid aad muhiim u ah markaad iibsaneyso muraayadaha, sax? Hadaad ogolaato, ka dib qaababkan qurxinta qurxinta adigaa iska leh! Nooca muraayadaha indhaha ee farshaxanka aawadiis oo ka yimid London wuxuu had iyo jeer diiradda saaraa muraayadaha indhoolayaasha labadaba moodada iyo farshaxanka leh. Qaab-dhismeedka biraha-indhaha ee dhuuban ayaa lagu qurxiyay saddex luul oo ku yaal dhinaca bidix iyo midig, qaabkuna waa mid aad u jilicsan. Farshaxanka dartiis, xilligan Alexander McQueen, Gucci, Chloe iyo noocyo kale ayaa sidoo kale bilaabay noocyo kala duwan oo looxyo qurxin ah,
Dhalashada muraayadaha duuliyaha ayaa runtii xiriir dhow la leh duuliyeyaasha. Waa muraayadaha ay Bausch & Lomb Company ugu talagashay duuliyeyaasha ka soo horjeedda stratosphere. Waxay qaadataa naqshad u eg ilmada waxayna ka samaysan tahay bir bir fudud. Ka soo horjeedka naqshadeynta kore ee muraayadaha muraayadaha bisadaha, muraayadaha indhaha ee 'Aviator Glasses' waxay leeyihiin naqshad hoos u dhigeysa labada dhinacba, taasoo dadka ka dhigeysa inay diiradda saaraan qeybta hoose ee wajiga Sidaa darteed, sidoo kale waxay ku habboon tahay gabdhaha leh garka fiiqan, kuwa kuwa gaaban oo wajiyo ballaaran waa inay isku dayaan sida ugu fiican ugana fogaadaan.